News | खान
News | Tag: खान
जिया खानकी बहिनीपछि सेर्लिन चोपडाले पनि लगाइन् साजिद खानमाथि यौन शोषणको आरोप
एजेन्सी । बलिउडका चर्चित फिल्म निर्माता हुन् साजिद खान । उनीमाथि पछिल्लो समय यौन शोषणको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । केही दिन अगाडि मात्रै करिश्मा खानले उनीमाथि यौन शोषण गरेको आरोप लगाएकी थिइन् ।
थाहा पाउनुहोस् इरफान खानबारे रोचक कुराहरु
एजेन्सी । बलिउडका कुशल अभिनेता थिए इरफान खान । उनको ५४ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । गत वर्ष खान गम्भिर अस्वस्थ भएर लामो समय लन्डनमा उपचार गराई फर्केका थिए । त्यसबेला उनलाई न्यूरोइन्डोक्राइन ट्यूमर भएको थियो ।
किन गुमनाम जीवन बिताइरहेकी छन् शाहरुख खानकी दिदी ?
एजेन्सी । बलिउडमा चर्चित अभिनेता शाहरुख खान आज जुन स्थानमा छन् उनले त्यो प्राप्तिका लागि ठुलो संघर्ष गरेका छन् । सानो उमेरमा पिता गुमाएका उनले धेरै संघर्षका दिनहरु देखे । उनको परिवारको बारेमा आज जति चर्चा हुन्छ त्यति चर्चा उनको दिदीको हुँदैन ।
फिल्मभन्दा पनि वेव सिरिज फाप्न थाल्यो यी अभिनेतालाई
एजेन्सी । बलिउडका चर्चित अभिनेता हुन् सैफ अली खान । उनले अभिनय गरेको फिल्महरुले पछिल्लो समय खासै सफलता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । तर, उनले ओटिटी प्लेटफर्ममा भने कमाल गरिरहेका छन् ।
यसरी चम्किएको थियो अभिनेत्री जरिन खानको भाग्य ?
एजेन्सी । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री हुन् जरीन खान । बलिउडमा उनलाई नाम कमाउन ठुलै संघर्ष गर्नु परेको थियो । आज उनको जन्मदिन हो । सन् १९८७ को १४ मे मा उनको जन्म भएको थियो ।
कति छ आमिर खानको सम्पत्ति ?
एजेन्सी । बलिउडका चर्चित अभिनेता हुन् आमिर खान । उनको बलिउडमा बनाएको स्टारडम आज पनि उत्तिकै बलियो रहेको छ ।
एजेन्सी । बलिउडका चर्चीत अभिनेता सलमान खानबारे जहिले पनि उनको रिलेशनसिप र फिल्मलाई लिएर चर्चा हुन्छ । उनको सम्पत्तिलाई लिएर कमै चर्चा हुने गरेको छ । उनको फिल्महरुले बितेका वर्षहरुमा १०० करोडभन्दा बढी व्यापार गरेका छन् ।
फिल्म पठानको तयारीमा शाहरुख खान, नयाँ लुक भयो भाइरल
एजेन्सी । शाहरुख खान दुवईमँ भएको आईपीएलको समापनसँगै मुम्बई फर्किएका छन् । शाहरुख खानलाई यशराज स्टुडियोमा स्पट गरिएको छ । उनको नयाँ लुक भाइरल भएको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार उनी आफ्नो नयाँ फिल्म पठानका लागि तयारी गरिरहेका छन् ।
आज बलिउड अभिनेता शाहरुख खानको जन्मदिन, थाहा पाउनुहोस् उनीबारे रोचक कुराहरु
एजेन्सी । बलिउडका किङ खानको जन्म सन् १९६५, नोभेम्बर २ मा भएको थियो । हंसराज कलेजबाट आफ्नो अध्ययन पुरा गरेका शाहरुखलाई क्रिक्रेट खेल्न मनपर्छ । उनको मनपर्ने खाना तन्दुरी चिकन हो ।